प्रधानमन्त्री ओलीलाई मार्ने षड्यन्त्र कसले गर्दैछ, गाेकुल बाँस्काेटाले गरे खुलासा ! - News 88 Post
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मार्ने षड्यन्त्र कसले गर्दैछ, गाेकुल बाँस्काेटाले गरे खुलासा !
June 11, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीलाई मार्ने षड्यन्त्र कसले गर्दैछ, गाेकुल बाँस्काेटाले गरे खुलासा !
काठमाडौ। सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का नेता गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीमाथि भयानक षडयन्त्र हुन लागेको बताएका छन् ।
एक जना प्रदेश सांसदले बोलेको भन्दै केपी ओली नमारी कांग्रेसले नजित्ने रहेछ भन्ने विषयतर्फ संकेत गर्दै बास्कोटाले यस्तो बताएका हुन् ।
यसरी बोल्ने ओली विरोधी गठबन्धनमै रहेका त सामेल छैनन् भन्दै बास्कोटाले प्रश्न उठाएका छन् ।
तर उनले कुन नेताले यसरी बाेलेकाे भनेर नखुलाए पनि पशुपतिनाथ रहेकाे क्षेत्रका प्रदेश सांसदले यस्ताे बाेलेकाे उनले जनाएका छन् ।
‘केपी ओली नमारे कँङ्ग्रेसले नजित्ने रहेछ, प्रधानमन्त्री माथि कुनै भयानक षडयन्त्र हुदै रहेछ।नत्र प्रदेश सांसद त्यो पनि पशुपतिनाथ रहेको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले यस्तो कसरी बोल्न सक्छ ? ओली बिरोधी गठबन्धन नै यसमा सामेल त छैनरु काँङग्रेसको आधिकारिक भनाई चाहिन्छ।एमालेहरु सचेत बन।’ बास्कोटाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।
मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी अघि बढ्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हालेलगत्तै उनकै निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र निकायका अधिकारीलाई १२ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लाग्न र आवश्यक योजना निर्माण गरी सुरक्षास्थितिलाई मजबुत बनाउन निर्देशन गरेको हो । गृहप्रवक्ता जनकराज दाहालले मन्त्री अधिकारीबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार परिपत्र जारी गरिएको जानकारी दिए ।
काेराेना महामारी तेस्रो लहरको खतरा कसकसलाई छ ?
नरोत्तम वैद्यले के भनेका थिए प्रदेश सभामा ? ओलीको हत्या गर्ने भनेकै हुन् हेर्नुस् पूरा भिडियाे
माधव नेपाल समूहको कारबाही फुकुवा, कांग्रेसलाई तनाब
राष्ट्रपतिद्वारा शपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी